Kabhoni - Wikipedia
Ngoda (ruboshwe) ne Grafati (rudyi), mahalotropu maviri eKabhoni
grafati, ngodza ne dzimwe
(nemamwe mahalotrupu ayo)
grafati: tema, inotaridzika sesimbi
Huremu hwe Hatomu
Kabhoni muTafura ye Nhangande
Numeri ye Hatomu
boka 14 (boka re kabhoni)
bloku - p
Konfigari ye mhodzigetsi
Fhezi pa STP
Poyindi ye Sublimation
Dhensiti (near r.t.)
amufurosi: 1.8–2.1 g/cm3
grafati: 2.267 g/cm3
ngoda: 3.515 g/cm3
Fyuzheni ye Kudziya
grafati: 117 kJ/mol
grafati: 8.517 J/(mol·K)
ngoda: 6.155 J/(mol·K)
Mutumbi we Hatomu
Miriro ye Oxidation
−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4
(a mildly acidic oxide)
Ito (eneji) ye kunonda
sp2: 73 pm sp: 69 pm
Rhedhiyasi ye Vhandewaarusi:
Strakcha ye kistaro
ngoda: ​isachiso-pakati ngoda-kyubhu
spidhi ye ruzha thin rod
ngoda: 18,350 m/s (at 20 °C)
ngoda: 0.8 µm/(m⋅K) (at 25 °C)
grafati: 119–165 W/(m⋅K)
ngoda: 900–2300 W/(m⋅K)
Mukweso we magetsi
grafati: 7.837 µΩ⋅m
Raya re Magineti
ngoda: −5.9×10−6 cm3/mol
Modhulasi ya Young
ngoda: 1050 GPa
ngoda: 478 GPa
Uwandu we modhulasi
ngoda: 442 GPa
Rheshiyo ye Pwasoni
Kuoma mu u-Mohs
Numeri ye CAS
hatomu kabhoni: 7440-44-0
Vaijipita ne Vasumeri (3750 BCE)
Akaziva kuti inhangande ndi:
Enzanhara ikuru ye Kabhoni
Kabhoni (kubva kuChiratini: carbo kureva "marasha"; muChishona unogona kunzi Murasha inhangande re mushonga rine chiratidzo C uye numeri ye hatomu 6. Isinausimba ne hombaina (tetravalent) ichiita kuti mhodzigetsi mana avepo kuti aumbe bhondi rigombedzwana re mushonga. Ndeyeboka rechigumi nemana retafura yerupotera. Kabhoni inongoumba inenge 0.025% chete yegoko reRinopasi. Enzanhara nhatu dzinongoitika, 12C ne13C ichidzikama, ukuwo 14C irhedhiyosomo (radionuclide), ichiora nehafu yeupenyu hwemakore angangoita 5,730. Kabhoni chimwe chezvinhu zvishoma zvinozivikanwa kubva kare-kare.
2.1 Ruvambo (etimoloji)
2.2 Mashoko ashandiswa
Tsananguro[chinja | edit source]
Kabhoni iri pachinzvimbo 15 yenhangande yakanyanya kuwanda mugoko reRinopasi, uye iripachinzvimbo chechina chakanyanya kuwanda muchadenga nekuwanda mushure mesikamanzi (hidhirojeni), Ran'a (chimuzuva; hiliyamu), uye okisijeni. Kuwanda kwe Kabhoni, kusiyanisa kwemikumbanidzwa iri oganiki yayo, uye kugona kugadzika mirongo (polymers) pahujoto unowanzosanganwa nawo paRinopasi inoita kuti chinhu ichi chishande sechinhu chakafanana chehupenyu hwese hunozivikanwa. Iri pachinzvimbo chechipiri panhangande dzinowanzo wanikwa mumwiri wemunhu ne masi (mass) (zvingaita 18.5%) mushure meokisijeni.
Mahatomu eKabhoni anogona kubatana pamwechete nenzira dzakasiyana, zvichikonzera akasiyana mahalotropu eKabhoni. Mahalotropu anozivikanwa anosanganisira grafati, ngoda, amufurosi kabhoni uye fullerenes. Hunhu hwekabhoni hunosiyana zvakanyanya neiyo fomu yechihalotropu. Semuenzaniso, grafati ine opaque uye dema ukuwo ngoda rinonyanya kujeka. Grafati yakapfava zvekuti inogadzira mutsetse pabepa (saka zita rayo, kubva pashoko reChigiriki rekuti "γράφειν" zvinoreva "kunyora"), nepo ngoda riri iro rakaomesesa rinoitika zvakasikwa rinozivikanwa. Grafati iconductor yakanaka yemagetsi nepo ngoda rine conductivity ye magetsi yakaderera. Pasi pemamiriro akajairwa, ngoda, mananochubhu ekabhoni, uye grafini (graphene) zvine akanyanya kupisa ekupisa kwezvinhu zvese zvinozivikanwa. Ese mahalotopu ekabhoni akasimba pasi pezvakajairwa mamiriro, uye graphite iri iyo yakanyanya kugadzikana thermodynamically fomu pakudziya kwakajairwa nekumanikidza. Izvo zvinodzivirira kemikari uye zvinoda hujoto yakanyanya kuita kunyangwe neokisijeni.
Iyo yakajairika oxidation mamiriro emikumbanidzwa eKabhoni asiri oganiki ndeye +4, nepo +2 inowanikwa muKabhoni monoksaidhi uye transition metal carbonyl complexes. Iwo makuru masosi ekabhoni asiri oganiki anosanganisa limestones, dolomites uye kabhoni dhioksaidhi, asi akakosha akawanda anoitika mu organic deposits yemarasha, peat, mafuta, uye methane clathrates. Kabhoni inoumba numeri huru yemakomboni, kupfuura chero chinhu chipi nechipi, ine makomboni anoda kusvika miriyoni gumi atsanangurwa kusvika pari zvino, asi nhamba iyoyo inongova chidimbu chidimbu chenhamba yezvinofungwa zvinobvira makomboni pasi pemamiriro akajairwa. Nechikonzero ichi, kabhoni yagara ichinzi "mambo wezvinhu".
Ruvambo (etimoloji)[chinja | edit source]
Zita rokuti Kabhoni rakabva kupashoko reChiratini rokuti carbo rinoreva kuti marasha, muchishona ringagona kunzi Rhasha kuti rikwanise kutsauraniswa ne shoko rinoshandiswa mazuva ose rasha.
Mashoko ashandiswa[chinja | edit source]
murasha- kureva Kabhoni zvichienderera nechirevo chezita kumutauro warakabva.
Hombaina (tetravalent) tarisai hukomba hweNhangande
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabhoni&oldid=96056"
This page was last edited on 20 Chikumi 2022, at 13:50.